काठमाडौं । एक १ हजार ३०० वर्ष पुरानो हिन्दू मन्दिरमा गम्भीर खोज फेला परेको छ । पाकिस्तानी–इटालियन पुरातात्विक विज्ञहरूले उत्तर पश्चिमी पाकिस्तानको स्वाट जिल्लाको एउटा पहाडमा हजारौं वर्ष पुरानो कुरा पत्ता लगाएका हुन् । यो मन्दिर बारिकोट घन्डाईमा उत्खननको क्रममा पत्ता लागेको थियो ।
जानकारी अनुसार त्यहाँ पानी ट्याङ्की फेला पारिएको छ । पाकिस्तानको खैबर पख्तूनख्वाको पुरातत्व विभागका फजल खलिकले बिहीबार यो घोषणा गरे कि त्यो मन्दिर भगवान विष्णुको हो । उनले भने कि यो मन्दिर १,३०० वर्ष पहिले हिन्दु शाही कालमा निर्माण गरिएको थियो ।
हिन्दू शाही वा काबुल शाही (इसापूर्व ८५०–१०२६) एक हिन्दू वंश थियो जसले काबुल उपत्यका (पूर्वी अफगानिस्तान), गन्धर (आधुनिक पाकिस्तान) र वर्तमान उत्तर पश्चिम भारतमा शासन गर्थे ।
पुरातत्वविदहरूले मन्दिर स्थल नजिकको शिविर र उत्खननको क्रममा गार्डको लागि मीनार्टहरू पनि भेट्टाएका छन् । विशेषज्ञहरूले मन्दिरको नजिक पानीको पोखरी पनि भेट्टाए । सम्भवतः त्यहाँ भक्तहरू पूजा अघि स्नान गर्थे ।
खालिकले भने कि यस क्षेत्रमा पहिलो पटक हिन्दु शाही कालको अवशेष रहेको छ । इटालीको पुरातात्विक मिसनका प्रमुख डा. लुकाले भने कि यो गान्धार सभ्यताको पहिलो मन्दिर हो जुन स्वाट जिल्लामा पाइन्छ । स्वाट जिल्लामा बौद्ध धर्मका धेरै स्थानहरू अहिलेपनि छन् ।
डा. बाबुराम भट्टराईलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही गर्न माग